Google Pixel ၏မျက်နှာပြင်နှင့်ပြwithနာများ | Androidsis
Pixel2မျက်နှာပြင်သည်ပြproblemsနာအချို့ရှိပါသည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ် Google တရားဝင်ယင်း၏စမတ်ဖုန်းသစ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည် Pixel2နှင့် Pixel XL 2။ နှစ် အလွန်ပြည့်စုံသောဖုန်းများ ဂူဂဲလ်သည်ယခုအချိန်အထိပေါ်ထွက်လာသောအကောင်းဆုံးနှင့်သူတို့အကောင်းဆုံးရောင်းသူဖြစ်လာရန်အလားအလာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
တင်ဆက်ပြီးနောက်နှစ်ပတ်အကြာတွင်၎င်းတို့စတင်ခဲ့ပုံရသည် ပထမဆုံးပြproblemsနာများသည် Google Pixel2အတွက်ဖြစ်သည်။ ပြwithနာနှင့် ပါတ်သက်၍ တိုင်ကြားသူများရှိသည် pantalla ကိရိယာ၏။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ?
အသုံးပြုသူများကကြောင်းအစီရင်ခံနေကြသည် Google Pixel2၏အရောင်ချိန်ညှိခြင်းနှင့်အလင်းရောင်သည်သင့်လျော်သလိုအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ။ တိုင်ကြားမှုပမာဏတိုးလာနေသည်။ ဒီပြသနာကို Google ကအတင်းအဓမ္မရှင်းပြခိုင်းသည်
သုံးစွဲသူများထံမှအဓိကတိုင်ကြားချက်သည်ရည်ညွှန်းသည် ညံ့ဖျင်းသောအရောင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း Pixel2ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများသည်ဖန်သားပြင်၏အချို့သောနေရာများတွင်တောက်ပမှုကွဲပြားသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။ The Display illumination သည်တစ်ပုံစံတည်းမဟုတ်ဘဲကြည့်ရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြwithနာများရှိသည်။ အခြားအသုံးပြုသူများကသူတို့၏ဖန်သားပြင်များသည်အမှတ်အသားရှိသည်ဟုမှတ်ချက်ချသည် အပြာရောင်လေသံ။ ဤများစွာသောအသုံးပြုသူတိုင်ကြားချက်များသည် Google ကိုရှင်းပြရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ထုတ်ကုန်၏ panel ကိုဤနည်းအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည် ပိုပြီးသရုပ်မှန်ပေးပါ။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများသည်ထို option ရှိသည် 10% အားဖြင့်ပြည့်နှက်တိုးမြှင့်။ update များမှတဆင့်သူတို့သည်ဖုန်း panel ကိုတိုးတက်စေရန်မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ တ ဦး တည်းကတည်းကများစွာသောမေးခွန်းတစ်ခုခု ဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုမညီမညာဖြစ်နေသောအရောင်ကို fix လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
ခြော, Google သင်ကြီးထွားလာနိုင်သည့်ပြaနာတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အသုံးပြုသူများ၏အရည်အသွေးနှင့်မကျေနပ်ပါ Google Pixel2မျက်နှာပြင်များနှင့်ပြanနာကိုဖြေရှင်းရန်အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုဟုမထင်ရ။ ယခုအချိန်အထိအရာအားလုံးပြသနာသည် LG မှထုတ်လုပ်သော panel ၏အရည်အသွေးတွင်ပြitsနာရှိကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ Google ကအဖြေတစ်ခုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Pixel2မျက်နှာပြင်သည်ပြproblemsနာအချို့ရှိပါသည်